Shiinaha Fashion tassel maqaar la isku qurxiyo kiis la isku qurxiyo oo leh gacanta gacanta oo leh jibbaar xidhitaan fidsan hoose ee qabanqaabiyaha kor u istaagida bac weyn oo loogu talagalay haweenka haweenka wax soo saarka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Camei Ele&warshadaha
Fashion tassel maqaar la isku qurxiyo kiis la isku qurxiyo oo leh gacan-gacmeed gacanta oo leh jibbaar xidhid guri dabaq hoose ah oo soo qabanqaabiyaha kor u istaaga bac weyn oo loogu talagalay dumarka
Shayga NO. : 3223 boorso la isku qurxiyo
Midabka: buluug/ brown
Baakadaha: 1pcs/bac PP
20 GP Qty: 14444PCS
40 GP Qty: 31111PCS
Boorsadan Ca-Mei ee la isku qurxiyo oo loogu talagalay in lagu kaydiyo oo lagu habeeyo burushka, lipsticks, maqasyada, mascara, cadarka iyo qalabka kale ee qurxinta. Sibidhka ayaa si habsami leh u socda, iyo PU-guharagqalabku wuu fiican yahay laakiin ma badna. Naqshadaynta Tassel iyo midabka, boorsooyin yar oo ku habboon dadka da' kasta leh. Waxqabadyo badan iyo kuwo badan, sidoo kale waxaa loogu adeegi karaa sidii boorsooyin sida, muraayadaha muraayadaha iyo bacaha qalabaynta, oo daboolaya baahidaada ugu badnaan.
Boorsadan quruxda lagu qurxiyo waa waasac waxayna ku haboon tahay qalabka safarka, isqurxin, loshin, burush, iyo dhamaan waxyaabaha kale ee quruxda aad u baahan tahay. Waxay leedahay hoos fidsan oo awood u siinaya inay si fudud ugu fadhiiso miiska miiska ama dharka.
tayada Premium- Ka samaysan PU adag, xidho adkaysi u leh harag Maaddadu waxay si weyn uga hortagtaa boodhka, xagashada iyo kuuskuuska.
qiimo weyn -Cabirka: 210*150*85MM, qaab leydi ah. Is haysta marka sibidhka la dhigo, si fudud ugu geli boorsada dugsiga, boorsada dhabarka iyo kiis gaaban. Qiime weyn leh, waxay la socotaa 1 jeebab oo sibban oo waaweyn oo waxaad si fudud uga dhex arki kartaa qalabkaaga xafiisyada iyo qalabkaaga.
Naqshad qurxoon- Muuqaalka daabacaadda holographic buuxa, hagaajinta baahidaada. Shaqo fiican iyo naqshad la taaban karo, is haysta, la qaadi karo, miisaan fudud welina waara. Tollida la xoojiyay waxay wanaajisaa waarta kiisas qalin-qoriyeedka.
Awood weyn- Run ahaantii waa qol gudaha ah, oo ku habboon burushka, qadaadiicda, furayaasha, waxyaalaha la isku qurxiyo, qalabka la isku qurxiyo iyo waxyaabo kale oo yaryar. Ma jiraan wax jeebab ah ama jeebab aan loo baahnayn oo ku jira kiiska caatada ah ee taagan, fudud laakiin shaqeeya.
Sippers jilicsan- Kala qaybi shayga oo ka ilaali siibadaha inuu furmo oo ay ka soo dhacaan bacda sibiidhka. Si tartiib ah u soo jiid jiid-jiifka marka aad si habsami leh u furto siibka. Xiritaanka siibka tayada leh, fududahay in la furo oo la xidho.
Midabada kala duwan- Waxaan haynaa 2 midab oo kala duwan oo aan ka dooran karno (kala duwan, ama bunni, buluug) markaa tag, dooro kuwa aad jeceshahay oo ku qaado adduunkaaga madadaalo firfircoon!
Shaqooyin badan- Ku habboon in lagu kaydiyo qadaadiicda lacagta caddaanka ah, iyo qalabyada kale, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida bacaha qalin qorida, bacda faylka, kiis qabanqaabiyaha.
Hore: Shandad yar oo qurux badan oo 3D unicorn glitter ah oo PVC ah oo leh gacan qabasho leh xidhitaan jibbaar leh oo leh labanlaab xadhig la isku hagaajin karo oo weyn oo loogu talagalay carruurta da'yarta ah ee wax ka iibsanaya dugsiga shaqada
Xiga: Boorsada PVC-ga ee cad ee 3D unicorn-ka ah oo leh xadhig sibidhka leh oo leh labanlaab xadhig la isku hagaajin karo oo weyn oo loogu talagalay carruurta da'yarta ah ee wax ka iibsanaya dugsiga shaqada
bacda qabanqaabiyaha kor u istaagida hoose
dumarka dumarka ah
oo leh gacanta curcurka
Qaab xiddig dhaldhalaalaya maqaar PVC ah oo la isku qurxiyo...
Xarafka gliter-ka ee iridescent sidaha isqurxinta toi...
Qaabka ubaxa cagaaran ee la qaadan karo ee daabacaadda poliest...
Naqshad garaafeed midab leh oo iridescent ah oo la isku qurxiyo ba...
Qaabka Shell PU maqaar buuxa daabacaadda holographic...
Midab fantastik ah oo daabacan holographic ah...